एनआरएनए आईसीसी पदाधिकारीमा अमेरिकबाट अहिलेसम्म पाँच उम्मेदवार | himalayakhabar.com
एनआरएनए आईसीसी पदाधिकारीमा अमेरिकबाट अहिलेसम्म पाँच उम्मेदवार
3rd Aug 2019, Saturday | २०७६ श्रावण १८, शनिबार १८:२०
अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनअरएन) एनसीसी अमेरिकाकी पुर्व उपाध्यक्ष रविना थापाले पनि एनआरएनए आईसीसीमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन् ।
थापाले आफ्नो फेसबुक मार्फत शनिवार खुला तर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदावरी दिने घोषणा गरेकी हुन् । उनको यो उम्मेदवारी घोषणासँगै अमेरिकाबाट आईसीसी पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने आकाक्षीको संख्या पाँच पुगेको छ ।
यस अघि उपाध्यक्षमा सोनाम लामा, महासचिवमा डा. केशव पौडेल, सचिवमा गौरीराज जोशी र सहकोषाध्यक्षमा एसी शेर्पाले उम्मेदवारी दिने जानकारी सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भईसकेका छन् । रविना यस अघि पनि एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्षमा उम्मेदवार भएर पराजित भएकी थिईन् ।
आईसीसी पदाधिकारीमा एउटै देशवाट धेरै उम्मेदवार हुँदा धेरैको हार्ने संभावना देखिन्छ । तर, यस पटक अवस्था केही फेरिनपनि सक्ने वातावरण बन्दै गरेको छ ।
यस पटक आईसीसीमा सोनाम लामा उपाध्यक्ष पदमा बलिया उम्मेदवार हुन् । उनलाई संस्थापन पक्षवाट पनि सहयोग र समर्थन मिल्ने संभावना छ । केही महिना अघि वर्तमान उपाध्यक्ष तथा अगामी अध्यक्ष पदका प्रबल दाबेदार कुमार पन्तले सोनामलाई उपाध्यक्ष पदमा ल्याउन सकिने प्रस्ताव पुर्व अध्यक्ष शेष घलेको समुहसमक्ष गरेका थिए ।
सोनाम यस अघि उपाध्यक्षमा कुमार पन्त र कुल आचार्यसँग पराजित भएका थिए । तर, सोनाम आफैंले भने उपाध्यक्षमा औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी भने घोषणा गरेका छैनन् ।
महासचिवमा एनआरएनए अमेरिकाका पुर्व अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । औपाचारिक रुपमा घोषणा नगरेपनि उनले सामाजिक संजाल र व्यक्तिगत रुपमा प्रचार प्रसार शुरु गरेका छन् ।
तर, उक्त पदमा युरोपको बेलायतबाट हेमराज शर्माको दावी छ । पन्त र पुर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने निकट मानिने हेमराजलाई पराजित गर्न डा. पौडेललाई निकै सकसपूर्ण छ ।
डा. पौडेलले कुल आचार्यलाई सहयोग गर्न पुगेमा यो उनका लागि झन समस्या हुनेछ । पौडेललाई क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिन पनि केहीले सुझाव दिएका छन् । तर उनले निकठस्थलाइ परिचालन गरेर महासचिवमा दावी प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्का संभावित उम्मेदवार गौरी जोशीको पक्षमा पनि सामाजीक संजालमा प्रचार प्रसार शुरु भएको छ । गौरीलाई यस पटक आईसीसीमा सचिवका लागि उम्मेदवारी दिन भवन भट्ट र कुमार पन्त दुवैले सुझाव दिईरहेका छन् ।
गौरी पनि साझा उम्मेदवारका रुपमा आफ्नो दावी पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । गौरीले पनि सहमति र सल्लाहमै आफु उम्मेदवार वन्ने चाहाना व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले गौरी यस पटक आईसीसीमा बलियो देखिएका छन् ।
एसी शेर्पा सहकोषाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिने सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । सहकोषाध्यक्षमा उनको को सँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ स्पष्ट भएको छैन । तर, उनी पनि बलिया उम्मेदवार हुन् ।
पुर्व अध्यक्ष शेष घलेको समूहको सहयोग र समर्थन एसीलाई छ । तर, उनको जित हार प्रतिस्पर्धामा को आउँछ त्यसमा निर्भर छ । एनआरएनए आईसीसीको आगामी नेतृत्व चयन लगायतका लागि अक्टोबरको मध्येमा काठमाडौमा सम्मेलन आयोजना हुदैंछ ।
अमेरिकाका नेपालीहरूले भने एउटै पदमा अमेरिकाबाट जानेहरू भीड्ने अवस्था नहोस् भनेर अपेक्षा राखेका छन् ।
डेलिगेटका लागि आवेदन फारमः
एनआरएनए अमेरिकाले एनआरएनए आईसीसीमा जाने डेलिगेटका लागि आवेदन लिन शुरु गरेको छ । एनआरएनए अमेरिकाको सदश्यता नम्बर सहित आवेदन फारम भर्न सकिन्छ ।
अमेरिका एनआरएनएमा करिव ९ हजार सदस्य छन् । यस आधारमा करिब १ सय ५० जना डेलिगेटका रुपमा भाग लिन पाउँछन् । यी डेलिगेटले नै नयाँ नेतृत्वका लागि मत हाल्न पाउँछन् ।
टेक्सस एलपासो मलमा गोलीबारी कयौंको मृत्यु
२०७६ श्रावण १८, शनिबार १५:५६
हिमालयखवर संवाददाता अमेरिका- अमेरिकाको टेक्सस राज्य स्थित एल पासोमा भएको गोलीवारीमा १९ जनाको मृत्यु र कयौं घाइते भएका छन् । शनिवार बिहान करिव १० बजेतिर एलपासो ...
दुइ सांसदसँग प्रवासी मञ्चको अन्तरकृया
२०७६ श्रावण १८, शनिबार २२:१३